avril 2018 - Page 37 sur 79 -
Halatra taolam-paty : Mitaky rafitra manokana
18/04/2018 admintriatra 0
Ny andininy faha-360 nasiam-panavaozana, toko fahatelo amin’ny lalàna 96-001 dia manameloka ireo mpangalatra taolam-paty hanao asa an-terivozona mandra-pahafatiny. Nasiam-panavaozana io andininy faha-360 io noho ny fahatsapana fa maivana loatra ny sazy ka tsy mampatahotra ireo …Tohiny
Hiakatra 5 m ny hahavon’ny onjan-dranomasina : Entanina tsy handriaka ireo mpampiasa ranomasina
Tafakatra 5 metatra ny haavon’ny onjan-dranomasina, nanomboka ny omaly 17 aprily ary vinavinaina mbola hitohy hatramin’ny rahampitso 19 aprily izany, araka ny filazana avy sampana mpamantatra ny toetr’andro. Manoloana io fiakaran’ny onja io, mahazo filazana …Tohiny
Sambava : Mpanamboatra lalana maty voahitsaky ny « tracteur »
Fanatanterahana asa no natao nefa fahafatesana no hita. Lehilahy iray manodidina ny 30 taona no fantatra fa maty tsy tsa-drano voahitsaky ny tracteur tany Sambava. Ny antoandron’ny talata tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro no …Tohiny
Fiahiana ara-tsosialy mavesatra : Hanamafisana ny toe-karenan’ireo tokantrano marefo ny loza voajanahary
Notanterahina nanomboka omaly, 17 aprily ary haharitra roa andro ny atrikasa hamaritana ny tondrozotra entina hanatsarana sy handrafetana tsara kokoa ny rafitra ny fiahiana ara-tsosialy afaka miatrika ny dona mahery vaika ny loza voajanahary. Tanjon’ny …Tohiny
« 1 … 35 36 37 38 39 … 79 »
Nifarana omaly ny fihaonambe ara-toekarena eo amin’i Sina sy Afrika, na ilay antsoina hoe Focac, notanterahina tany Beijing, Sina. Anisan’ireo firenena afrikanina miisa 26 niatrika izany i Madagasikara ka ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nitarika ...Tohiny